I-Apple ifumanisa ezinye iingxaki kwiscreen se-Apple Watch Series 3 | Ndisuka mac
I-Apple ibona ezinye iingxaki kwiscreen se-Apple Watch Series 3
Kwaye kubonakala ngathi ezinye iiwotshi ezisungulwe kule batch yakutshanje yeApple Watch Series 3 ngaphandle kweLTE, zinokuba nengxaki kwiscreen. Kule meko kubonakala ngathi yinto yehardware endaweni yesoftware, ukusukela ngeZijongeka njengothotho lwemigca eskrinini enokubonakala kakuhle ngakumbi xa icinyiwe.
Umfanekiso wentloko weqabane le-9To5Mac usibonisa ngokucacileyo ingxaki kwezinye zeemodeli ze-Apple Watch. Yenze kucace okokuqala ukuba ayizizo zonke iimodeli ezichaphazelekayo, zimbalwa kwaye iApple ikufumanisile ukuba luphawu olulungileyo, kuba iya kuqhubeka nokutshintsha / ukulungisa kuzo zonke iimeko.
Le yingxaki ebonakala kwinani elingagqitywanga leeyunithi ngenxa yoko akukho mfuneko yokuba nexhala ekuqaleni. Le yinto enokubangelwa kukusilela ekuvelisweni kwescreen okanye ngenxa yokufuma, ke kungcono ukuzama ukurabha indawo apho kuvela khona imitya kwaye ukuba ayitshabalali yise ngqo kwi-SAT. Inkqubo yeApple kwezi meko ihlala ifana kwaye iyonke Siyacaca ukuba inkonzo yasemva kokuthengisa intle kakhulu.
Kule meko kwaye njengoko besichazile ngasentla, oku kubonakala ngathi yingxaki yezixhobo kunokuba yingxaki yesoftware, ke bonke abo basebenzisi abachaphazeleka sesi siphene kufunekayenza idinga no-Apple ngokukhawuleza kwaye usombulule ingxaki, kuba oku kungcono ukuya kwivenkile yeApple okanye ngqo kwindawo oyithenge kuyo. I-Apple ayinayo inkqubo yaseburhulumenteni evulekileyo ngoku, kodwa ukuqonda ingxaki asiyi kuba nangxaki ekuqhubeni utshintsho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple ibona ezinye iingxaki kwiscreen se-Apple Watch Series 3
I-Apple isungula ngokusesikweni i-watchOS 4.1 yabo bonke abasebenzisi
Ukufana kweDesktop 13.1.1 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa